Fanorenana tsy ara-dalàna : « Tsy misy indrafo ny fandrodanana » -
AccueilRaharaham-pirenenaFanorenana tsy ara-dalàna : « Tsy misy indrafo ny fandrodanana »
Raha toa ka efa nampilaza mialoha ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) tamin’ny alalan’ny didy hitsivolana ny minisitera eo anivon’ny Prezidansa misahana ny tetikasan’ny Filoham-pirenena sy ny Fanajariana ny Tany, ary ny Fampitaovana (M2PATE) amin’ny fampitsaharana ny fanorenana tsy ara-dalàna, nanambara ny minisitra Benjamina Ramanantsoa fa “tsy misy indrafo ny fandrodanana” ireny fotodrafitrasa tsy ara-dalàna nahorin’ny CUA ireny.
Tafiditra amin’izany fanorenana tsy ara-dalàna izany mantsy ireo “pavillons” nahorin’ny CUA etsy amin’ny Esplanade Analakely ireo. Nohazavain’ny minisitra hatrany fa tsy azo atao velively ny manorina fotodrafitrasa eo ambonin’ny fotodrafitrasa efa mipetraka. “Ben’ny tanàna firy izay no nifandimby nitantana an’Antananarivo, tsy nisy nikitika io Esplanade Analakely io koa aty aoriana amin’ny fitantanan’i Lalao Ravalomanana vao nametrahana pavillons eo”, hoy ny minisitry ny M2PATE.
Voalaza ihany koa fa fivarinan’ny rano avy any ambony rehetra any ny ao ambanin’io Esplanade io, ka tsy tokony hisy fanorenan-trano sy fotodrafitrasa eo amboniny, ary tokony ho mijanona ho toerana fiantsonan’ny fiara izany.
Marihina fa noho ny fitiavam-bola sy fitadiavam-bola hanomanan’ny antoko Tiako i Madagasikara (Tim) izay tarihin’ny mpanolotsaina manokan’ny Ben’ny tanàna, Marc Ravalomanana, ny fifidianana 2018 no tena anton’ny fananganana tsena etsy sy eroa. Nanamafy izany rahateo ny mpanolotsaina monisipaly, Lalatiana Ravololomanana, satria tsy hita mazava ny fandehan’ny vola rehetra azon’ny CUA amin’ny tsena. Amin’izao fotoana izao mantsy, dia efa lasa feno tsena sy kioska natsangan’ny CUA avokoa ny sisin-dalana rehetra natokana ho an’ny mpandeha an-tongotra. Noho izay indrindra, dia nohamafisin’ny minisitra fa tsy maintsy hesorina sy harodana avokoa ireny tsena tsy manara-dalàna rehetra ireny.
Toraka izany koa ireo fanotorana tsy nahazoana alalana sy amin’ireo toerana tsy azo hanaovana izany. Tsy maintsy mamerina azy ireny amin’ny laoniny ireo izay minia mandika lalàna, ka manao bontolo amin’ny fanotorana sy famefena. “Tsy mijanona izany ny tetikasa fandrodanana ireo fanorenana tsy ara-dalàna rehetra. Efa manana paikady amin’izany ny minisitera”, hoy ny minisitra Benjamina Ramanantsoa.